Open Data Myanmar ODM - Open Data Myanmar
To show collective information of land dispute cases
To obtain rights of local people with equitable approach
To be able to solve local issues in peaceful manner
We are O.D.M, Open Data Myanmar.
"Open Data Myanmar" (O.D.M) was formed into November 2014 for the process of sharing information and messages with others inaparticular time and place regarding land dispute issue. ODM will serve as data transmission of ground to all level.
မြန်မာနှင့် မြေယာ အငြင်းပွားမှုများ
၁။ ယခင်အစိုးရလက်ထက်မှ၊ မြေယာသိမ်းဆည်းခဲ့မှုများမှာ ပုံသဏ္ဍာန်ပေါင်းစုံဖြင့်နိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိခဲ့ပါပြီ။
There are variety forms of land disputing all over Myanmar in past government.
၂။ အကျိုးဆက်ဟုပြောရုံနှင့် ပြီးတော့သည့် အခြေအနေမဟုတ်ပေ၊ နစ်နာမှုများကို အသိအမှတ်မပြုသရွေ့၊ အချင်းချင်း ပြေလည်စေသော အဖြေရှာမှုများကို တွန်းအားမပေးသရွေ့၊ ထို့ပြင် အချင်းချင်း မပြေမလည်ဖြစ်နေသည်များကို နိုင်ငံတော်မှ ကြားဝင်မပေးသရွေ့ အချိန်မရွေး ပွင့်ထွက်ဖြစ်ပေါ်လာမည်မှာ အသေအချာဖြစ်ပါသည်။
So we say that “it was an impact for us” but it does not make content us.We feel nearly outburst if the State lacks to commit the involvement.
၃။ သို့သော် အထက်တွင်ပြဆိုခဲ့သော နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ကဏ္ဍမှာ အလွန် အရေးကြီးသည်မှန်သော်လည်း၊ နိုင်ငံ တော်အစိုးရကိုသာ ပုံချအပြစ်ပြောနေခြင်းမှာလည်း လုံးဝမမှန်နိုင်ပေ။
But, whatever may the government is pivot role to that inflammable condition, it would be also false to blame solely on the government, the administrative body.
၄။ ဆိုလိုသည်မှာ နိုင်ငံ့အကျိုးပြု စိတ်ဓါတ်ရှိသူများလည်း၊ စိတ်တူသူများစုကာ အရပ်ဖက်အဖွဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် ကျရာတာဝန်မှ ပါသင့်သည်ဟုခံယူပါသည်။ ဤခံယူစိတ်ဖြင့် Open Data Myanmar အဖွဲ့သည် စုစည်း၊ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
Instead, all the people who want nation building should take part in the form of civil society. So that, We, Open Data Myanmar, organize with this dedication and we commit ourselves in that mind.
Open Data Myanmar (O.D.M) was formed for the process of sharing information with others inaparticular time and place regarding land. Read more...
Copyright 2018. www.opendatamyanmar.com
Data View >